မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - YourBrainRebalanced.com - Brain On Porn
ငါအဲဒါကိုမွမ်းမံထားမယ်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားရန်နှင့်စာရင်းထဲတွင်ထပ်ထည့်ရန်လိုအပ်သည့် Q နှင့် A မ်ားကိုပိုမိုအကြံပြုပါ။
မေး: ပြန်ဖွင့်, အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိပါသလဲ တစ်ဦး reboot ၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ?
ဖြေ။ ။ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ကိုနာမည်တောင်မှတောင်မခေါ်နိုင်ဘူး။ reboot လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတချို့ကိုဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာက reboot လုပ်ဖို့ယူပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ ငါတို့အားလုံးကလူတစ် ဦး ချင်းစီပါ။ တချို့အတွက်တော့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရတယ်။ ပျမ်းမျှ reboot သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ (ရက် ၃၀ +/- ရက်) ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခု (ဥပမာရက်ပေါင်း ၁၀၀) သတ်မှတ်ပြီး၎င်းကိုသေးငယ်သည့်ရည်မှန်းချက်များအဖြစ်အပြည့်အ ၀ ထားရန်အလွန်အကြံပေးသည်။ (90 နေ့ရက် ၁၀၀ တွင်လကိုရောက်ရှိခြင်းနှင့်တူသည်) ရက် ၁၀၀ ပြန်လည်စတင်ခြင်းအပိုင်းအစများကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲထုတ်ခြင်းဥပမာတစ်ခု -
Q: reboot ပြီးနောက်ပြန် porn ကိုစောင့်ကြည့်သွားပါနိုင်သလား?
A: နောက်တစ်ကြိမ် porn စတင်ကြည့်ရှုပါလျှင်အမှတ်ထို့နောက်သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်တိုးတက်မှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်နှင့် reboot ဘာမျှမအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ နည်းလမ်းပြန်လည်စတင်ပါမည်လုံးဝကိုအစဉ်အမြဲ, porn ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့နှင့်စစ်မှန်သောလူတို့နှင့်အတူလိင်ခံစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ဘဝအစား၏ဆက်သွယ်မှုလေ့လာရေးတစျခုအသကျရှငျ။
မေး: PMO အဘယ်အရာကိုရပ်တည်သလဲ,
A: P - Porn၊ M - တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း၊ အို - အော်ဂဇင်။
မေး: PE / ED / DE ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
A - PE - အချိန်မတန်ဘဲသုက်လွှတ်ခြင်း၊
ED - Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု;
DE - နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု။
Q: flatline ကဘာလဲ?
ဖြေ။ ။ မိန်းကလေးတွေ၊ လိင်ကိစ္စဒါမှမဟုတ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမှာလိင်စိတ်မရှိခြင်း (အလိုဆန္ဒ) လုံးဝမရှိတော့သောအချိန်ကာလ။ သို့သော်၎င်းသည်အဆင့်တစ်ခုသာ ဖြစ်၍ ဖြတ်သွားသည်။
Q: edging သလဲ?
မေး: ok edging ပါသလား
A: Edging သည် reboot လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သွေးဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ကအော်ဂဇင်ကိုရရှိပြီး၊
မေး: ကို restart နေချိန်မှာငါတစ်ခါသာ porn ကိုကြည့်ပါလျှင်သူကအိုကေလား?
တစ်ဦးက: သင်အောင်မြင်စွာပြီးတော့ကျိန်းသေမျှအချိန်တိုကာလအတွင်း reboot ချင်လျှင်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ reboot ၏အတန်ငယ် 1 /3အားဖြင့်နောက်ကျောကိုသင်ထားမည်, သင်သာတစ်ချိန်ကနှင့်သင့်တပြင်လုံးကို rewiring တိုးတက်မှုသတ်ဖြတ်တက်အဆုံးသတ်လုပ်ဒါကြောင့်တစ်မူးရူးနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
မေး: ကညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate မှ ok လား?
A: porn နဲ့ပေါင်းတာထက်ရွေးချယ်တာကပိုကောင်းတယ်။ သို့သော်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအောင်မြင်စွာ reboot လုပ်လိုပါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
မေး: ဒါဆိုဘယ်မှာငါ start သလဲ?
A: သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းစုဆောင်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့နေဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်အပေါင်းတို့၏ပထမ။ လူအပေါင်းတို့သည်ဗီဒီယိုများ, ပုံများ, bookmarks ကိုဖျက်ပစ်ပါ။ မည်သည့်ညစ်ညမ်း related မဂ္ဂဇင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get ။
မေး: OK ကို။ အဘယ်သို့ငါယခုငါသည်ငါ့အခန်းထဲနှင့်ငါ့ကွန်ပျူတာများတွင်ခဲ့တိုင်း P ကို ​​related ပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တယ်?
ဖြေ 1) ကဖိုရမ်အပေါ် Register;
2) တွင် Sign;
3) တည်ရှိသည်ဂျာနယ်များအပိုင်း, ကိုသွားပါ http://www.yourbrainrebalanced.com/index.php?board=2.0.
4) သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂျာနယ်မချခင်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပါ http://www.yourbrainrebalanced.com/index.php?topic=9.0
5) တစ်ဂျာနယ် Make နှင့်သင့်နောက်ခံကိုဖော်ပြရန်နှင့်အချိန် porn ကနေသန့်ရှင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သွားနေစဉ်သင့်ရဲ့ reboot ၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ရှောက်လော့။
Q: ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့ငါအခက်တွေ့နေတယ်။ သူတို့ကိုငါမတွန်းလှန်နိုင်ဘူး။ ဘာလုပ်မလဲ?
A: အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများသုံးပြီးအားဖြင့်ဆိုဒ်များအားပိတ်ဆို့ခြင်းကြိုးစားနိုင်ပါ။ တချို့ကအသုံးပြုမှု K9 လုံခြုံရေးနှင့်အခြားသူများကို porn sites များပိတ်ဆို့ဖို့ DNS Server ကို blockers ကိုအသုံးပြုပါ။
မေး: K9 လုံခြုံရေးနှင့် DNS Server ကို failproof လား? ယခုတွင်ငါသည် porn ကနေလုံးဝလုံခြုံ Am?
A: မရှိပါ။ K9 နှင့်အခြား blockers များသည် failproof မဟုတ်ပါ။ သူတို့ဟာ speedbump တွေလိုပဲသင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်။ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိသောအချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေရန်အချိန်ယူရမည်။ အားနည်းသောအစက်အပြောက်များနှင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိသောဆိုဒ်များကိုပင်မကြိုးစားပါနှင့်။
Q: ငါ့ဂျာနယ်ကလူကြိုက်များတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါမကောင်းတာလား။
ဖြေ။ ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ သင်၏ဂျာနယ်တွင်သင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်လိုပါကအခြားသူများကိုလည်းထောက်ခံပါ၊ အခြားသူများ၏ဂျာနယ်များကိုဖတ်ပါ၊ အကြံပေးပါ၊ မေးခွန်းများမေးပါ၊ ဖော်ရွေပါ။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည် ED ခံစားနေရပါက၎င်းကိုအချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်ရှောင်သင့်သည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင် - ရှေ့ဆက်သွားပါ။ အချို့သူများအတွက်မူခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့် libido အဆင့်ကိုရိုက်ကူးသည့်အစပြုရန်စတင်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ reboot အပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
မေး: ဘယ်မှာငါ porn မှစွဲလမ်းအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာတွေ့နိုင်မလဲ
A: သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများမှာ Gary Wilson ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည် www.yourbrainonporn.com.
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများချည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါအဲဒါကိုမွမ်းမံထားမယ်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားရန်နှင့်စာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့် Q နှင့် A မ်ားကို ပိုမို၍ အကြံပြုပါ။